Maamulka Hirshabeelle oo Hanjabaad u diray Farmaajo iyo kheeyre! - Muqdisho Online
Home News Maamulka Hirshabeelle oo Hanjabaad u diray Farmaajo iyo kheeyre!
Maamulka Hirshabeelle oo Hanjabaad u diray Farmaajo iyo kheeyre!
Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa xiliagan sheegayaa in dowladda Soomaaliya ay ku heyso caqabad kala duwan,waxaana ay dhaliil ka muujiyeen habka loo qeybiyey deeeqo gurmad ah oo loogu talo galay deegaanada ay abaaraha ka jiraan ee Maamul Goboleedyada.
Wasiirka Madaxtooyadda Maamulka Hirshabelle Cabdullaahi Maxamed Cadow ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ka tabanayeen eed la xiriirta eexasho Maamulada kale ee dalka ka jira,isla markaana si isku mid ah aan wax loogu qeybin,isaga oo dhaliil ka muujiyey shirkii Arrimaha gargaarka ee shalay lagu soo geba-gabeeyey Muqdisho.
Isaga oo Wareysi siinayey Tv-ga Universal ayaa shaaca ka qaaday in Hir-Shabelle ay dib u fureyso Garoonka Diyaaradaha Cisaley iyo Dekadda Ceel Macaan sidoo kalena ay Ciidamo dhigayaan Xaduudka ay la wadaagaan gobolkan Banaadir.
Warkana kasoo baxay Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa uu salka ku hayaa Maamulka Hir-Shabeelle oo saluugsan qodobadii kasoo baxay shirkii ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Gargaarka iyo musiinooyinka ee lagu soo geba-gabeeyey Muqdisho
Previous articlePuntland oo sheegtay in la soo abaabulay kufsiga ka dhaca deegaanadeeda
Next articleCiidanka Booliska oo weeraray guriga Sargaal Caan ah (Aqriso)